iTunes ndabere Atụmatụ s
Ha bụ ugboro mgbe ị kwesịrị nyefee faịlụ site na gị iPhone ka a PC eleghị anya ị na rapaara na-achọta nri ngwọta mejuputa a. Ọ ga-abụ na-ebufe music, akwụkwọ, videos, foto, ma ọ bụla faịlụ, onye ọ bụla na-aga n'ihi a ngwá ọrụ na awade mfe na arụmọrụ. Na-esote na ngalaba nke a ederede ga-ewe gị site a ngwọta nke ga-ịfụ gị n'uche site n'ikike nke ya iru ala na ọrụ na na okwu nke na-ebufe ọkacha mmasị gị music si a PC gị iPhone.
Otu n'ime ngwá ọrụ ga-dozie mgbaghoju anya n'ihi na ị bụ wondershare TunesGo. Wondershare TunesGo bụ a cross n'elu ikpo okwu na awade iPhone ọrụ a dịgasị iche iche nke ọrụ na ngalaba nke faịlụ nyefe. Nke a nile na otu faịlụ transfer software a maara na-adị nnọọ egosipụta na ọrụ nnyefe na ndakọrịta na iOS ngwaọrụ-ọ bụ dakọtara na ọbụna ndị ọhụrụ iOS ngwaọrụ. Mere, olee otú ị na-eji nke a software nyefee music si a onye kọmputa na-iPhone?
Iji Wondershare TunesGo nyefee Music site na kọmputa na-Iphone
E nwere ihe abụọ nhọrọ na ị pụrụ ịhọrọ site na jiri bụrụ na ị chọrọ nyefee ndị music faịlụ na ị bụ crazy banyere. The abụọ nhọrọ na-na nke TunesGo nwere ike iji nyefee gị music faịlụ.
Nyefee Music si iTunes ka Ngwaọrụ
Nyefee Music si PC ka ngwaọrụ ozugbo
Nyefee Music si iTunes ka iPhone Iji Wondershare TuneGo
Nke a na nhọrọ kasị mma kwesịrị ekwesị n'ihi na ndị na-achọ ka na-a nyere iTunes playlist ka a ngwaọrụ. Nyefee gị music gị iPhone ngwaọrụ eji a nhọrọ, ị ga-mkpa nwere ma iTunes na Wondershare TunesGo arụnyere na kọmputa gị. Ị nwere ike pịa Download buttons n'okpuru ibudata ikpe version nke Wondershare TunesGo.
Họrọ OS ị na-eji mgbe ahụ na ibudata ya. The software bụ free na-agbalị ma ị ga-mkpa ịzụta ya ka na-zuru ọrụ. Ọ na-atụ aro ka ị ịzụta ma ọ bụrụ na ị na-achọ na-eji software na nza nke faịlụ transfer ọrụ. Mgbe echichi, wụnye software na kọmputa gị ma malite ya na ngwa ngalaba. Jikọọ gị iPhone a na kọmputa na iji eriri USB. Jide n'aka na iPhone achọpụtara site PC-dị nnọọ iji hụ na eriri USB na-arụ ọrụ nke ọma. Ozugbo ulo oru na ekwentị achọpụtara, ị ga-enweta ihe interface nke na-egosi ekwentị gị aha.
Pịa na Nyefee Music na pịa Import na n'elu menu nke interface na-egosi. Nke a ga-enye gị a dobe ala menu na ị ga-ahọrọ ibubata si iTunes.
Họrọ ndị chọrọ playlist na ị chọrọ nyefee si iTunes ngwaọrụ gị-site Pịa ego igbe na-esote listi ọkpụkpọ. Imecha site na ịpị OK.
Nyefee Music Site PC ka ngwaọrụ ozugbo
Na-esote nhọrọ i nwere ike iji bụ kpọmkwem ebufe music site na kọmputa na-iPhone ngwaọrụ ozugbo. Iji mezuo nke a, ị ga-awụnye Wondershare TunesGo dị ka e kwuru na aga na ngalaba nke a ederede. N'otu aka ahụ, ị ga-mkpa ẹkedori ngwa na jikọọ na gị iPhone na PC na iji eriri USB. Ozugbo software na ulo oru na ngwaọrụ jikọọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ aha ekwentị gị ke ufọk interface. Na ala nke ekwentị foto, pịa Nyefee Music sochiri a click on Import. Na dobe ala menu nke na-egosi elu, pịa Import si PC / Mac.
Họrọ music faịlụ ị na-achọ nyefee site na windows File Explorer. Ozugbo i mere nhọrọ ziri ezi, pịa OK na faịlụ ga-amalite ịlụ kpọfere si PC gị iPhone ngwaọrụ.
Ndị ọzọ na atụmatụ Ị nwere ike nweta Site Wondershare TunesGo
E wezụga eziokwu na TunesGo ka ị nyefee music si PC ka ngwaọrụ na Anglịkan, software ga-gosi mkpa na-enye gị ndị ọzọ egwu ọrụ. The software ga-emekwa ka ị download music si Youtube kpọmkwem n'ime gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ebe ndokwa gị music faịlụ site na iji na mkpado. The software nwekwara oké n'inyere music faịlụ ndokwa nyere na ọ nwere ike na-akpaghị aka ọcha gị n'ọbá akwụkwọ. Ọ nwekwara ike-ekwe ka ị na-eme ndokwa music faịlụ n'ụzọ na-afọ ju-amasị gị na mmasị. Ọzọkwa, ngwá ọrụ kemgbe ịkwa akwa mere ka ezi na-elekọta ndakọrịta mbipụta na pụrụ ibilite site unsupported faịlụ na ngwaọrụ na iTunes. Otú a, ị na-azọpụta onwe gị nsogbu nke na-agba ọsọ n'ime music faịlụ a na-apụghị egwuri. The ọzọ jụụ ihe ị pụrụ ime na TunesGo bụ na-ekere òkè ndepụta ọkpụkpọ gị site na ọkacha mmasị gị na-elekọta mmadụ media ọwa. Anyị niile maara na mmadụ mgbasa ozi emewo n'elu ụwa na tunesGo ana achi achi ị na-enwe music ndị enyi na ezinụlọ site Facebook, Twitter n'etiti ndị ọzọ.
Ndị dị mfe, TunesGo bụ ihe ngwọta kasị mma bụghị nanị na nyefee music faịlụ site na PC na-iPhone ngwaọrụ, ma na-na-nweta a ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ekwu okwu banyere ihe ndị na-ruru ego na Wondershare TuneGo bụ na-na na na ndepụta!
Olee otú ọsọ Up Your iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 6 / 6Plus
Apple iPhone 1: The mbụ ọgbọ nke iPhone Akwụ ụgwọ Ruo $10.000
> Resource> iPhone> Ihe kacha Ngwọta nyefee Music site na kọmputa na-iPhone